Gabay ” Daduub” – Qaman Bulxan
HomeCommunity EventsTestContact UsPoetryGabay ” Daduub” – Qaman BulxanGabay – “Dacartuba” – QaasimMay 22, 2013	You are here: Home / Poetry / Gabay ” Daduub” – Qaman Bulxan	Gabay ” Daduub” – Qaman Bulxan
Caliyow dabuubtaada gabay, Daa’inkaa wadaye
Dabaylaha xagaagii dhaciyo, daafigaa sidaye
Noo dooji dooggiyo sidii, Dirirka Cawleede
Diirkiyo laftuu xulay hadduu, hadal wax daawayne
Dadkana uma sinnee reer tolkay, dacar ku nooleeye.
Anna waa ku diirsaday Ilaah, derajo siiyoowe
Daaraan garbaha qoon ku laad, damaqday Dhuuxoowe
Dibirrooti buu dhacay raggaad, dabaqadayseene
Iyo gobol runduda oo fadhiya, dagagga weeyaane
Dib u joogso waan kula dacwiyi, doodna waan celine!
Dardarsiga danaasaca la mood, dowr inaan ahaye
Dubbihii ku dhacay dhinac Barwaaq, degi ad maysaane
Daadduunka cayreed raggaa, dibadda meeraaya
Cali-Geriga Daadhiin shalay, naga durduurteene
Waa kaa darfiyey caanihii, Dagiyo Heemaale.
Anna waxaan dibbiray waa dagaag, deyro soo xulaye
Dabcigeedba yaa kugu ogaa, digasho mooyaane?
Hadday debecdo waw hiilisaa, doqon walaalkeede
Diiftiyo ushay garan intaad, dayada haysaane,
Dunna haddaadan ii tarin maxaad, iigu dano sheegan?
Duunyada fardood maalintaad, Deleb ku qaadaysay
Sidii duul Amxaaro ah markaad, nagu dabraynaysay
Intaad haatan ii labaddiblayn, muu damqado jiirku?
Daabaca ninkii kugu dhuftee, daabka kuu celiyey
Iyo kii “duleedshaay!“ ku yidhi, wax isma doorshaane,
Dakanadayda yaa kaa xigaad, igu danayn haatan?
Aar soo dibjiray neef hadduu, daacuftii geliyo
Oo kaga digsiiyoo ilkaha, dhiigga kaga daadsho
Aday dilaye goormuu Isaaq, Doollo iga qaaday?
Maxaa libinta Daarood lahaa, Dabacayuun siiyey?
Hadday Dubuxul uga heesayaan, dacarna waan siine
Ma wayse haatan daab iyo ul, kaga cabbaan dawlis?
Bulsho Daalis oo dibi dhaloon, loo dambarineynnin
Oo kii lahaa diiday bay, sidigtu doontaaye
Waxa adiga duug kaaga noqon, yeyga degi waayay!
Darka jabay dullaalkiyo dhulkuu, dadabku meeraayo
Deeqaa Ilaahay halkuu, xuliyey daadkiisa
War ii daa dugaag iyo Hartay, igaga deyraane!
Iiddoorse Dir weeyee hadduu, duullan soo bixiyo
Dunbuq iyo rasaastana hadduu, Debecsanow siiyo,
Horta yaa la da’a wayla yaab, dawyadaad mariye?
Diinkaan akhriyey way imaan, Dooy raggii jiraye
Dunji maalintaa waxaad qabtaan, waan u daahirine
Ma dammaniye daynkayga waa, dabaggelaayaaye
Idinkuba darkii Caynabaad, deris ku taalliine,
Dagaallama rag doorkii la laa, duubcaddii Hagare!
Ama na daaya waa wada qabnaa, daawashiyo ceebe!
Caliyow da’daan ahay waqaa, looma duurxulo’e
Dayib uma yiraahdaan jeeroo, hawli daashado’e
Nin walaalki doorsaday Ilaah, derejo siin waaye
Dalkaad Ina-Adeerkaa dhigtaad, weli degeysaaye.
Al Hyatt Medical Center
INDU0.00 N/A N/ANASDAQ3498.965 +33.722 +0.97%S&P 5001669.16 +2.87 +0.17%^FTSE6787.53 -16.34 -0.24%DAX0.00 N/A N/ACAC36.60 0.00 +0.00%1970-01-01 15:31